Wararka Maanta: Arbaco, Oct 16, 2019-Somaliland oo sheegtay in 190 milyan oo dollar lixdii bilood ee hore ee sanadkan kaga baxday Qaad
Arbaco, Octobar 16, 2019 (HOL )– Wasiirkii Maaliyada Somaliland Dr Sacad Cali Shire ayaa sheegay in lixdii bilood ee u horeeyey sanadkan lacag ka badan 190 milyan oo dollar lagu soo iibsaday Qaad.
Sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto lacagta adag ee shacabka kaga baxaysa maandooriyaha Qaadka, waxaanu xusay in uu cashuur ku kordhiyey si loo yareeyo qaadka balse aanu sidaas ku yaraanayn.
Wasiir Sacad ayaa sheegay in ganacsatadda Somaliland aanay dhaqan u lahayn in warshado la samaysto balse kaliya ay yaqaanaan in dibadda laga soo iibsado alaab ay ogyihiin qiimaha ay ka macaashayaan.
Sidaas waxa uu ka sheegay kulan uu u qabtay ardayda Jamacadaha ee dhaqaalaha oo lagaga doodayey dhaqaalaha Somaliland iyo caqabada hor taagan in uu kordho.
“Waxaanu warshado u yeelan waynay waa dhaqan, inagu waxaynu dhaqan u leenahay ganacsi, ninka lacagta haysta wuu sii og yahay inta uu ka faa’iiday shayga uu dibada ka keenayo, balse warshad lacagta la galinayo waxa ka soo baxaya maba garanayo, marka wuxuu ku odhanaya maxa khatarta I galinaya waxaan aan garanayo ayaan ka ganacsanayaaye, waxa kale oo iyana jirta in lacag badan kaga baxdo dhulkii iyo dayrkii inta aanad keenin warshadi waxaa kaga baxaysa lacag u dhow shan boqol oo kun, waxa kale oo aynaan lahayn xirfadii warshadaha, bir baa jabaysa waxa loo qaadaya dibadda”ayuu yidhi Shire.
Mar uu ka hadlayey lacagta Somaliland kaga baxda Jaadka waxa uu ku tilmaamay dhaqaale burbur iyo in lacagtii adkayd kaga baxdo Qaadka.
“Lixdii bilood ee sanadkan waxaynu soo iibsanay sagaal iyo toban milyan oo Killoo oo qaad ah, waxa inaga baxaya lacag adag oo ah boqol iyo sagaashan milyan oo doolar, waxa kale Jaadkaasi la dagaalamayaa wakhtigii, caafimaadkii iyo dhaqankii, waxaana fiican in la joojiyo”ayuu raaciyey hadalkiisa.
Wasiirka ayaa sheegay in mushkilada ugu weyn ee dhaqaale Somaliland haysta tahay lacag maalin walba ka baxaysa ee Jaadka lagu soo iibsanayo.